No. 2089, Tuesday, March 19, 2019 | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Issue » No. 2089, Tuesday, March 19, 2019
No. 2089, Tuesday, March 19, 2019
၁၃၈၀ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း ၁၄ ရက် (အင်္ဂါ၊ မတ် ၁၉၊ ၂၀၁၉)
ဗီယက်နမ်နှင့် ခြေစမ်းမည့် မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်း လူစာရင်းထုတ်ပြန်
အိုလံပစ်ဒုတိယခြေစစ်ပွဲအကြို ဗီယက်နမ်အမျိုးသမီးအသင်းနှင့် ခြေစမ်းမည့် မြန်မာ့ လက်ရွေးစင်အမျိုးသမီးဘောလုံး အသင်း၏ ကစားသမား ၂၄ ဦး စာရင်းကို ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်က ယမန်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်သည်။
အစိုးရ၊ တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်သည့် အ မျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန (NRPC) နှင့် ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက် ရေးပါတီ (KNPP) တို့ယမန်နေ့ က နေပြည်တော်၌တွေ့ဆုံပြီး KNPP အဖွဲ့တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူ စာချုပ် (NCA) တွင်ပါဝင်လက် မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေး ဆွေးနွေးခဲ့ ကြောင်း နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ် များကပြောသည်။
တာချီလိတ်တွင် လေထုညစ်ညမ်းရခြင်းသည် ထိုင်း၌ တောမီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်ဟု တာဝန်ရှိသူပြော
တာချီလိတ်မြို့နယ်အ တွင်း နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် မီးခိုးငွေ့ များ ရောက်ရှိလာမှုသည် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း တောမီးလောင် ကျွမ်းနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း တာချီလိတ်ခရိုင် ဒုတိယအထွေ ထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဇော်ဝင်း ဌေးက ပြောသည်။
TNLA က ဖမ်းဆီးသွားသည့် အရပ်သားရှစ်ဦး လွတ်မြောက်လာ၊ ကျန်ရှိနေသူများကို ထပ်မံလွှတ်ပေးရန်တောင်းဆို
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက် ပိုင်း နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၌ တအာင်း လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ (TNLA)က ဖမ်းဆီးသွားသည့် အရပ်သားရှစ် ဦး ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီး ကျန်ရှိနေသူများကို ထပ်မံလွှတ်ပေးရန် နမ့်ခမ်းဒေသခံများက တောင်းဆိုသည်။
အလောင်းတော်ကဿပဘုရားဖူးယာဉ်တိမ်းမှောက်၍ ငါးဦးသေ၊ ၁၂ ဦး အပြင်းအထန် ဒဏ်ရာရ
အလောင်းတော်ကဿပ ဘုရားဖူးမှန်လုံယာဉ်တစ်စီးသည် ယင်းမာပင်ခရိုင် ကနီမြို့နယ် ချောင်းမကြီး သစ်တောစခန်းအနီး ၌ မတ်လ ၁၈ ရက်နံနက်က တိမ်း မှောက်၍ ခရီးသည်ငါးဦးသေဆုံး ကာ ၁၂ ဦးအပြင်းအထန်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း ကနီမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးသိုက်စိုးထွန်းက ပြောသည်။
မင်္ဂလာဈေး (ယာယီ) အတွင်း လိင်စိတ်ကြွဆေး ရောင်းသည့်ဆိုင်ကို ဖမ်းဆီး၊ တရားမဝင်ဆေးဆိုင်များ ဆက်လက်အရေးယူမည်
မင်္ဂလာဈေး (ယာယီ) အတွင်း လိင်စိတ်ကြွဆေးများ ရောင်းချသည့် ဆေးဆိုင်တစ်ဆိုင် ကို ဖမ်းဆီးပိတ်သိမ်းထားပြီး တ ရားမဝင်ဆေးများ ရောင်းချသည့် ဆိုင်များကို ဆက်လက်ဖမ်းဆီးအ ရေးယူမည်ဟု မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြို့မရဲစခန်းမှ တာဝန်ကျရဲအရာရှိ တစ်ဦးကပြောသည်။
မိုးညှင်းနည်းပညာကောလိပ်ဆရာမ အသတ်ခံရမှု တရားခံမမိသေး
ကချင်ပြည်နယ်ရှိ မိုးညှင်းနည်းပညာကောလိပ်မှ ဆရာမတစ်ဦး နေအိမ်တွင် အသတ်ခံရပြီး ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို ဖမ်းမိရေးစုံစမ်းနေကြောင်း ပင်းဘော နယ်မြေရဲစခန်းမှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးကပြောသည်။
တနင်္သာရီမြို့၌ မီးလောင်ကျွမ်းပြီး နေအိမ်ခြောက်လုံး ဆုံးရှုံး၊ လူ ၃၀ ကျော် မီးဘေးသင့်
မြိတ်ခရိုင် တနင်္သာရီ မြို့တွင် တစ်နာရီကြာမီးလောင်မှု ကြောင့် နေအိမ်ခြောက်လုံး မီး လောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး လူ ၃၁ ဦး မီး ဘေးသင့်၍ ယာယီကယ်ဆယ် ရေးစခန်း ဖွင့်ထားရကြောင်း ယင်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ကျော် ဟိန်းက ပြောသည်။
လွှတ်တော်တွင် တပ်မတော်သားပါဝင်မှု ပယ်ဖျက်ရန် ခြေဥကော်မတီ၌ တိုင်းရင်းသားပါတီအချို့ဆွေးနွေး
လွှတ်တော်တွင် တပ်မ တော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များပါဝင်နေသည့်အချက် များကို ပယ်ဖျက်ရန် ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီဝင် တိုင်းရင်း သားပါတီကိုယ်စားလှယ်များက အစည်းအဝေး၌ အဆိုပြုဆွေးနွေး ခဲ့ကြောင်း ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦးက ပြောသည်။
ဝန်ကြီးဦးမြင့်မောင်ကို တနင်္သာရီတိုင်း ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်ရန် သမ္မတအဆိုပြု
တနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် လက်ရှိခေတ္တဝန်ကြီး ချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဦးမြင့်မောင်ကို အတည်ပြုခန့်အပ်ရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတက တိုင်းလွှတ်တော်သို့ ယမန်နေ့တွင် အဆိုပြုလွှာပေးပို့ခဲ့သည်။
ရေငုပ်သင်္ဘောကို တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနိုင်သည့် လေ့ကျင့်ခန်း ပထမဆုံးအကြိမ်လေ့ကျင့်
တပ်မတော်ရေ၏ စစ်ရေ ယာဉ်တပ်ပေါင်းစု ပင်လယ်ပြင် စစ်ဆင်မှုလေ့ကျင့်ခန်းကို ယမန် နေ့က ကိုကိုးကျွန်းဒေသရှိ မြန်မာ့ ပင်လယ်ပြင်ပိုင်နက်အတွင်း ပြု လုပ်ခဲ့ရာ ရေငုပ်သင်္ဘောအား တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခြင်းလေ့ကျင့် ခန်းကို ပထမဆုံးထည့်သွင်းလေ့ ကျင့်ခဲ့သည်။
ရခိုင်အရေး နိုင်ငံတကာအဖွဲ့များ၏ အစီရင်ခံစာပါရေးသားဖော်ပြချက်များကို တပ်မတော်စိစစ်
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက် ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဘင်္ဂါလီ များ၏ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်စဉ်များအပေါ် ထပ်မံစိစစ်အ တည်ပြုရန်တပ်မတော်က စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ခုံရုံးဖွဲ့စည်းဆောင် ရွက်နေကြောင်း တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
ဒီမိုကရေစီစနစ်သုံးစွဲ သည့် နိုင်ငံတွင် မည်သူ၏နှုတ်မိန့် ဖြင့် မည်သည့်အရာမျှလုပ်ဆောင် ၍မရသည်ကို ပြည်သူအားလုံး ထင်ထင်ရှားရှား သိစေလို ကြောင်း နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင် ခံပုဂ္ဂိုလ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားသည်။ ဘားအံမြို့၌ ပြည်သူလူထု တွေ့ဆုံပွဲကို ယမန်နေ့ (မတ်လ ၁၈ ရက်) တွင် ပြုလုပ်ရာ ဒေသခံ တစ်ဦးက ကိုယ်ပိုင်ခြံကို ခြံစည်း ရိုးခတ်ထားသည့်ကြားမှ ပြည် နယ်အစိုးရ၏ နှုတ်မိန့်ဖြင့် ညွှန် ကြားသည်ဟုဆိုကာ ကျူးကျော်ခံ ရသည့်အကြောင်း တင်ပြသည့် မေးခွန်းကို ပြန်လည်ဖြေကြားစဉ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ယင်း သို့ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။
NCA လက်မှတ်ထိုး ၁၀ ဖွဲ့၏ ကိုယ်စားလှယ်များ ဆွီဒင်နိုင်ငံသို့ လေ့လာရေးခရီးသွားရောက်
တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးသဘောတူ စာချုပ် (NCA)လက်မှတ်ထိုး တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ၁၀ ဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ်များသည် အရပ် ဘက်နှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ လုပ် ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ လေ့လာ ရန် ဆွီဒင်နိုင်ငံသို့ ကိုးရက်ကြာ လေ့လာရေးခရီးသွားရောက်နေ သည်။
၂၀၁၈ အကယ်ဒမီပေးပွဲသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရောက်မည်
၂၀၁၈ မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက် ရောက်မည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေး ပွဲကို မတ်လ ၂၃ ရက်တွင် The One Entertainment Park ၌ပြု လုပ်မည်ဖြစ်ပြီး ယင်းပွဲသို့ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်က နိုင်ငံ တော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အနေ ဖြင့် ဒုတိယအကြိမ်တက်ရောက် ခြင်းဖြစ်သည်။
ရခိုင်စစ်ရှောင်ဦးရေ တိုးလာ၍ ထောက်ပံ့ကူညီမှုများပေးရန် ကူညီရေးအဖွဲ့များ အစိုးရထံ တောင်းဆို
တပ်မတော်နှင့် ရခိုင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ (AA) တို့၏ တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်လာခြင်းနှင့် အတူ စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရသည့် ဒေသခံဦးရေ တိုးလာ၍ ရခိုင်ပြည် နယ်အစိုးရနှင့် ပြည်ထောင်စု အ စိုးရတို့က ထောက်ပံ့ကူညီပေးရန် ပိုးရွှီပြင် မဟာမိတ်လူမှုကူညီရေး အသင်းမှ ဦးအောင်ကျော်ကတိုက် တွန်းသည်။
ဇီးရိုးဘတ်ဂျက်ခရီးစဉ်များဖြင့် လာရောက်သူများ အွန်လိုင်းငွေချေစနစ်အသုံးပြုခြင်းကို ဘဏ်လုပ်ငန်းဖြင့် ထိန်းချုပ်ရန်စီစဉ်
ဇီးရိုးဘတ်ဂျက်ခရီးစဉ် အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက် လည်ပတ်ရာတွင် ၎င်းတို့နိုင်ငံရှိ အွန်လိုင်းငွေပေးချေစနစ် အသုံး ပြုခြင်းကို ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ် ဦးအောင်အေးဟန်က မတ်လ ၁၈ ရက်တွင် ပြောသည်။
(၁) မြောက်ဦးမြို့ဟောင်းတွင် လက်နက်ကြီး ကျရောက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းများတွင် ဖတ်ရပါသည်။ အမှန်ပင် တုန်လှုပ်မိပါသည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တို့သည် မြန်မာပြည်ထောင်စု၏ အနောက် ဘက် မျက်နှာစာဖြစ်ပါသည်။ ပြီးတော့ မီးခိုးထွက်စရာမလိုသည့် ခရီးသွားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအ တွက် ရှေးဟောင်းနှင့် သဘာဝအ ရင်းအမြစ် အများအပြား တည်ရှိ ရာ ဒေသများလည်းဖြစ်သည်။ နယ်မြေလုံခြုံအေးချမ်းမှု စိတ်မချရသည့် အချက်တစ်ခု တည်းနှင့်ပင် နောက်ဆက်တွဲ ဆုံး ရှုံးနစ်နာရမှုများက ရေရှည်အထိ အထိနာစေပါသည်။ ရေလမ်း၊ ကုန်းလမ်းများမှတစ်ဆင့် တစ် ဖက်နိုင်ငံများက နယ်စပ်ကုန် သွယ်ရေး၊ နယ်စပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ နယ်စပ်ဖွံ့ဖြိုးမှုများကို အာရုံစိုက် နေပါသည်။ လူအရင်းအနှီး၊ ငွေ အရင်းအနှီး၊ နည်းပညာအရင်း အနှီးမျိုးစုံဖြင့် ကြံဆကြိုးပမ်းနေ ကြပါသည်။
တက္ကသိုလ်ဆရာ၊ ဆရာမအိမ်ရာအသစ်တွင် နေခွင့်ရသူများက နေထိုင်ခြင်းမရှိဘဲ အငှားချထားမှုများရှိနေ
ရန်ကုန်မြို့ မင်းဓမ္မ ဥယျာဉ်အိမ်ရာရှိ ၀န်ထမ်းအိမ်ရာ အသစ်များတွင် နေထိုင်ခွင့်ရ သည့် တက္ကသိုလ်ဆရာ၊ ဆရာမ အချို့သည် ကိုယ်တိုင်မနေထိုင်ဘဲ တစ်ဆင့် အငှားချထားခြင်း ကြောင့် ဧပြီလကုန်၌ အခန်းပြန် သိမ်းမည်ဖြစ်ပြီး နောင်တွင်အခန်း မချထားတော့ဟု အဆင့်မြင့် ပ
ရန်ပွဲကို ၀င်ဆွဲသူသုံးဦး ဓားထိုးခံရ တစ်ဦးသေ၊ နှစ်ဦးဒဏ်ရာရ
စကားများရန်ဖြစ်နေ သည်ကို ၀င်ဆွဲသည့်အမျိုးသား သုံးဦးဓားမြှောင်ဖြင့်ထိုးခံရ၍တစ် ဦးသေဆုံးပြီး နှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိမှု အင်းစိန်မြို့နယ်တွင် မတ်လ ၁၇ ရက်ကဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
နေပြည်တော်ဆွေးနွေးပွဲ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကောင်းသည့်လက္ခဏာဖြစ်ဟု AA ပြော
အမျိုးသားပြန်လည်သင့် မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟို ဌာန (NRPC)နှင့် ရခိုင်လက်နက် ကိုင်အဖွဲ့ (AA)အပါအ၀င် NCA မထိုးရသေးသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်ရှစ်ဖွဲ့၏ နေပြည် တော်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပမှုသည် ငြိမ်းချမ်းရေးအ တွက် ကောင်းမွန်သည့်လက္ခဏာ
ဟယ်ရီနဲ့ မီဂန်မာကယ်ရဲ့ရင်သွေးလေးနာမည် စဉ်းစားနေတဲ့ ပရိသတ်တွေ
ဗြိတိန်တော်ဝင်မင်းသား ဟယ်ရီနှင့် မင်းသမီးမီဂန်မာကယ် တို့က ရင်သွေးလေးကိုစောင့်ကြို နေသလို ၎င်းတို့၏ ပရိသတ် များကလည်း ကလေးငယ်သည် ယောက်ျားလေးဖြစ်မည်လား၊ မိန်းကလေးဖြစ်မည်လား၊ ကိုယ် အလေးချိန်မည်မျှရှိမည်နည်းဟူ ၍ ခန့်မှန်းနေသည်။
The 5ive ဖျော်ဖြေပွဲ လက်မှတ်နှစ်ရက်အတွင်း ရောင်းကုန်သွား၍ ရုပ်သံလိုင်းမှ ထုတ်လွှင့်ပေးမည်
အမျိုးသမီးအဆိုတော် ငါးဦး၏ The 5ive ဖျော်ဖြေပွဲလက်မှတ်အားလုံး နှစ်ရက်အတွင်း ရောင်းကုန်သွားသဖြင့် ရုပ် သံလိုင်းမှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့် ပြသမည်ဖြစ်ကြောင်း ပွဲစီစဉ်သူ ကိုအီကြာကွေးက ပြောသည်။
အနုပညာရှင်များ နုတ်ထွက်ခြင်းကြောင့် Star Awards ဆုပေးပွဲတွင် SMS Voting စနစ် ရပ်ဆိုင်း
Star Awards ဆုပေးပွဲ တွင် Popular Award နှင့် People's Choice Award ဆုများ အတွက် ဆန်ခါတင်ရွေးချယ်ထား သည့် နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်များ ပြိုင်ပွဲမှ နုတ်ထွက်ပြီးနောက် ယင်းအစီအစဉ်ကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့ သည်။
အသရေဖျက်မှုဖြင့် တရားစွဲခံရသည့် မြစ်ကြီးနားဂျာနယ် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အပါအ၀င် သုံးဦးကို အာမခံပေး
တရုတ်တစ်သျှူးငှက် ပျောသတင်းရေးသားမှုနှင့် ပတ် သက်ပြီးအသရေဖျက်မှုပုဒ်မ၅၀၀ ဖြင့်တရားစွဲခံရသည့် မြစ်ကြီနား ဂျာနယ်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဦး ဘရန်မိုင်အပါအ၀င်သုံးဦးကိုဝိုင်း မော်မြို့နယ်ရပ်မိရပ်ဖများကအာ မခံ၍ တရားရုံးက အမခံပေး ခဲ့ကြောင်း ဦးဘရန်မိုင်က ပြေ
နည်းပြဆီမြွန်နီပုံစံ အောင်ပွဲခံခဲ့သော ရော်နယ်ဒိုကို စွဲချက်တင်
အက်သလက်တီကိုမက် ဒရစ်ကို အနိုင်ရရှိပြီး ချန်ပီယံ လိဂ်ကွာတားဖိုင်နယ်သို့ တက် ရောက်ခဲ့သောပွဲတွင် အောင်ပွဲခံပုံ နှင့်ပတ်သက်၍ ဂျူဗင်တပ်တိုက် စစ်မှူးရော်နယ်ဒိုအား ဥရောပ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် (UEFA) က မလျော်ကန်သော အပြုအမူဖြင့် စွဲချက်တင်လိုက်သည်။
အင်ဒီယန်းဝဲလ်စ်တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲတွင် ဒိုမီနစ်သီယန်နှင့် ကနေဒါဆယ်ကျော်သက်ဗိုလ်စွဲ
ကယ်လီဖိုးနီး ယားပြည်နယ် အင်ဒီယန်းဝဲလ်စ် တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲတွင် ဒိုမီနစ်သီယန် က ဗိုလ်လုပွဲ၌ ၃-၆၊ ၆-၃၊ ၇-၅ ဖြင့် အနိုင်ရရှိပြီး ရော်ဂျာဖက်ဒဲ ရာ၏ ခြောက်ကြိမ်မြောက် စံချိန် တင်ဗိုလ်စွဲရန် ကြိုးပမ်းချက်ကို အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပို့ကုန်လျော့၍ ရန်ကုန်-မူဆယ် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ကျဆင်း
တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပို့ကုန် ပမာဏ လျော့နည်းခြင်းကြောင့် ရန်ကုန်-မူဆယ် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ပြန်လည်ကျဆင်းခဲ့သည်။
ပြည်တွင်းစပါးဈေး တင်းတစ်ရာလျှင် ကျပ်ငါးသိန်းခန့်သို့ ကျဆင်းလာ
တရုတ်အဝယ်ရပ်နေ ခြင်းကြောင့် နွေစပါးပေါ်ချိန်တွင် ပြည်တွင်းစပါးဈေးသည် တင်း ၁၀၀ လျှင် ကျပ်ငါးသိန်းခန့်သို့ ကျဆင်းလားသည်။
အိန္ဒိယက မကြာမီ ပဲတင်သွင်း ခွင့်ပြုဖွယ်ရှိ
အိန္ဒိယ အစိုးရသည် မတ်ပဲ၊ ပဲစင်းငုံ အပါအဝင် ပြည်ပ မှ တင်သွင်းလိုသည့် ပဲတန်ချိန် အဆိုပြုလွှာများကို အွန်လိုင်းက လျှောက်လွှာခေါ်ယူနေသည်ဟု သတင်းရထားကြောင်း မြန်မာ နိုင်ငံ ပဲမျိုးစုံနှင့် နှမ်းကုန်သည်အ သင်း အတွင်းရေးမှူး ဦးမင်းကိုဦး က ပြောသည်။